Xherdan Shaqiri dhaawaciisa Liverpool qarineesay dhaqaatiirta Switzerland ayaa soo bandhigeen – Wakaaladda Wararka Hiilnews
Talaado, Maarso, 19, 2019 (HNN)- Kubad sameeye Xherdan Shaqiri dhawaanahan kooxda Liverpool uma cayaarin sidoo kalena 6-kulan ugu dambeesay macalin Jurgen Klopp toos uma adeegsaneyn cayaaryahankan.
Haatan Xherdan Shaqiri dhawaacii uu qabay waxaa banaanka soo dhigeen dhaqaatiirta Switzerland oo baaritaan ku sameeyeen lana ogaaday gumaarka inuu ka dhaawacnaa dhowrkii todobaad ee ugu dambeesay waxaana laga saaray liiska xulka Switzerland kulamada ay la cayaarayaan Georgia iyo Denmark.
Shaqiri oo 27-jir ah xili cayaareedkan wuxuu Liverpool u dhaliyay 6-gool EPL balse kooxda shaxdeeda kowaad ma uusan kasoo muuqanin tan iyo 30-kii Janaayo waxayna ahayd arin in badan la is weydiinayay sababta Klopp cayaaryahan u adeegsaneyn.
Dhaqaatiirta Switzerland waxay baahiyeen in Shaqiri dhaawaciisa wax cusub ahayn ee Liverpool qarineesay si aysan cadaadis saxaafada kala kulmin madaama ay loolan ugu jiraan hanashada EPL iyo Champion-ka.
Waxaa haatan loo fahmay in macalin Klopp cayaaryahan u shaacin waayay dhaawaciisa in kooxdiisa saxaafada ku mashquulin lana sheeg sheegin dhaawaca Shaqiri oo maskaxiyin Liverpool wax u dhimi lahaa loolanka ay horyaalka ugu jiraan.
Xherdan Shaqiri dhaawaciisa Liverpool qarineesay dhaqaatiirta Switzerland ayaa soo bandhigeen added by admin on 19/03/2019